Actualidad အိုင်ဖုန်းတွင်တစ်ပတ်တာအကောင်းဆုံး အိုင်ဖုန်းသတင်း
Ignacio Sala | | အိုင်ဖုန်းသတင်း, NOTICIAS
ယခုအပတ်မှာခရစ်စမတ်ရောက်ခါနီးမှာ Apple အကြောင်းသတင်းအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့တွေအများကြီးစကားပြောခဲ့တာကတော့ Black Friday ဖြစ်ပြီး iPhone News မှပါ အားလုံးသတင်းနှင့်ကမ်းလှမ်းချက်များချက်ချင်းအကြောင်းကြားခဲ့သည်။ ဤကမ်းလှမ်းချက်များကိုသောကြာနေ့အထိသာရရှိနိုင်သော်လည်းအများစုမှာမနက်ဖြန်၊ တနင်္လာနေ့အထိတိုးချဲ့ပေးသည်။
ယခုလအတွင်း၊ Cydia သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဖြစ်သော update များ၊ Actualidad iPhone မှာငါတို့ဖန်တီးခဲ့တယ် iOS9နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအကောင်းဆုံး tweaks များဖြင့်စုစည်းထားသည်။ အချို့သောသူများကယနေ့ iOS9နှင့်မကိုက်ညီသောအခြား tweaks များနှင့်အတူတူပင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးသည်။ developer က tweak ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်သည်။ ငါတို့သည်လည်းအတူစုစည်းထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်5အကောင်းဆုံး WinterBoard themes များ မင်းကြိုးစားရမယ်
လာမည့်အိုင်ဖုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောရလျှင်လက်ရှိမော်ဒယ်လ်ကိုအစားထိုးမည့်နောက်မော်ဒယ်နှင့် ပတ်သတ်၍ အသစ်သောအယူအဆများပေါ်လာသည်။ အထူးသဖြင့်၊ iPhone 6k၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကီးဘုတ်ပါသောအိုင်ဖုန်းသဘောတရား, BlackBerry ကိုချစ်သူများအများအပြားပွင့်လင်းလက်နက်နှင့်အတူကြိုဆိုလိမ့်မယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုအပတ်တွင်အယူအဆများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုရုံသာမကဘဲ၊ လာမည့် iPhone7တွင်နားကြပ်ပေါက်မပါရှိခြင်း.
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Apple မှ Apple Watch2အသစ်ထုတ်လုပ်ရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်းကောလာဟလများထွက်ပေါ်လာချိန် မှစ၍ ဤကိရိယာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောသတင်းကကျွန်ုပ်တို့အားလေ့လာမှုကိုပြသသည်။ Apple Watch ၏သုံးစွဲသူများကပြုလုပ်သည်.
နောက်ဆုံး၊ Black Frida နဲ့အတူလိုက်နာမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကိုပြမယ် ယနေ့တနင်္ဂနွေအထိသိသိသာသာလျှော့စျေးဖြင့်ရရှိနိုင်မည့်လျှောက်လွှာများစာရင်း။ သင်မဆုံးဖြတ်ရသေးပါက၊ ယူရိုအနည်းငယ်ကိုကယ်တင်လိုပါကကြာရှည်မစောင့်ပါနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းသတင်း » Actualidad အိုင်ဖုန်းတွင်တစ်ပတ်တာအကောင်းဆုံး
iOS မှာ Cortana ကိုစမ်းသပ်ဖို့မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကပထမဆုံးဖိတ်ကြားချက်ကိုပေးပို့လိုက်သည်